Sei COVID Zvirambidzo Zvave Kukanganisa Vana
Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Sei COVID Zvirambidzo Zvave Kukanganisa Vana
Vana vanga vari kutarisa kwakasimba kwekunetsekana mukati meiyi denda, vachinzwa kushushikana kwepfungwa nemagariro kwekudzokororwa kuvharika uye kurambidzwa munharaunda. Kune vechidiki vane makore 6-18, data ichangoburwa inoratidza kusvika makumi manomwe muzana vakasangana nekuderera kwehutano hwepfungwa uye kugara zvakanaka mune chimwe chinhu. Chizvarwa chinotevera chiri kusangana nekushushikana, kushushikana, uye kusagadzikana panguva iyo kushamwaridzana kwakakosha mukukura kwavo kwepfungwa nemagariro.
Musi weChitatu, Ndira 19, batana Dr. Martha Fulford (Chiremba Chirwere Chirwere uye Associate Purofesa paMcMaster University) uye Dr. Khrista Boylan (Pediatric Psychiatrist uye Associate Purofesa, Dhipatimendi rePsychiatry & Behavioral Neurosciences paMcMaster University), pamwe chete nevatungamiri Dr. Richard Tytus naDr. Dennis DiValentino yechiitiko chepamhepo chega, Rega Vana Vave Vana.
Rega Vana Vave Vana vachabatanidza nhamba yevashandi vezvokurapa vane maonero akasiyana nemitemo yehurumende yemazuva ano-kuita kuti chiitiko ichi ive nhaurirano ine nharo uye inonakidza panyaya iyi yazvino.
Rega Vana Vave Vana varatidziri vachagadzirisa zvinhu zvine chekuita neCCIDID-19 izvo zviri pamusoro pepfungwa dzevashandi vehutano sezvavanochengeta varwere vavo vevana uye nekupa gwara kuvabereki. Vachataurawo nezvezvichemo zviri kuitwa neveruzhinji.
Zvikamu zvakaparadzana zvichaitirwa vashandi vehutano (2pm kusvika 3:30pm ET) uye neruzhinji (4pm kusvika 5:30pm ET). Iwo ese ari maviri anoratidza inodyidzana Q&A mikana.
Misoro iri kukurukurwa inosanganisira, asi haina kugumira ku:
• Kutsanangura denda uye patiri iko zvino - denda rekuvhunduka uye PCR yakanaka
• Zvazvinoreva kuvana vedu – kubayiwa nhomba kwevana kunosungirwa here?
• Ndeipi njodzi chaiyo yekurega vana vachidzokera kuchikoro? Haina kukwirira sezvaunofunga
• Ndeipi njodzi chaiyo yekurega vana vachikura zvakare? Extracurriculars, vana vachiona vanasekuru, kushamwaridzana neshamwari dzavo, nezvimwe.
• Kuenda kune "Zvitsva Zvemazuva ose" - mishonga mitsva yava pedyo
Pamusoro 6 Hutano hweTekinoroji Mafambiro e2022
Chidzidzo Chitsva paCOVID-19 Migumisiro Yepamuviri
Florida-Caribbean Cruise Association inodyidzana ne...
VIA Rail inoramba iri chifambiso chakavimbika kwazvo ...
Rwanda yakagadzirira kugamuchira vashanyi vekunze ...
Destination Marketing Masangano muUkraine Nyowani...
Taos Air Nonstop Roundtrip Flights kubva kuCalifornia uye...
Itsva Dhata paPediatric Brain Tumors
Green Tea Extracts Market Outlook Inovhara Bhizinesi Idzva...
Fraport, Lufthansa neMunich Airport inodaidzira kururamisira ...
National Health Alert: Denda-Rinofambiswa neMafambiro Kusimudza...
Kurapa Kunoshanda Kwekushaya mbereko kweMurume neMukadzi